धेरै ठुलो चमत्कार र कायपलट गर्न नसके पनि प्रदेश सातमा अब हामी राम्रो शुरुवात गर्छौ- मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट
धनगढी ,असार २३ ।
प्रदेस सातको सरकार बनेको झण्डै ५ महिना भयो । नेपालमा संघियता लागु भए पछि बनेको पहिलो सरकार सँग नागरिकका धेरै अपेक्षा रहेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ,निती तथा कार्यक्रम पनि ल्याइसकेको छ । बजेट आफ्नो नहुँदा ,कर्मचारीको समस्या ,कानुनको समस्याका बिच ५ महिनामा सरकारले सामान्य नियमित आफ्नो काम कार्बाही अगाढी बढाएको छ । अब बजेट प रिचालन गर्ने कानुनी बाटो खुलेप छि सरकारले गती लिनेमा सरकारी अधिकारीहरु ढुक्क बनेका छन् । यदपी चालु आर्थिक बर्ष को बजेट पनि सरकारके खर्छ गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको हालको काम कार्बाही र आगामी योजना बारेमा प्रदेस सातका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सँग गोदावरी अनलाइनको लागी गोबिन्द रोस्याराले कुराकानी गर्नु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री ज्यु यहाँलाई स्वागत छ ?
नेपालमा सघींयता नौलो अभ्यास हो , संघियतामा नागरीकको ठुलो अपेक्षा पनी छ । प्रदेश सरकार गठन भएको पनी ४ महिना भइसकेको छ, यस बिचमा नागरीकलाई प्रदेश सरकारले कसरी जोडीरहेको छ ?
लामो राजनीतीक सघंर्ष बाट हामी यहाँ सम्म पुगेका छौं । जनताले नजीक बाट सेवा सुविधाहरु पाउनु पर्छ भन्ने अपेक्षा हो र त्यहि अपेक्षा हामो पनी हो । सरकार बनेको ४ महिना भएको छ ,यो समय प्रयाप्त होइन । यसलाइ व्यवस्थीत रुपबाट अगाडी बढाउनका लागी अहीलेको ४÷५ महिनाको समय मात्रै र्पयात्त होइन। जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नका लागी प्रदेश सरकार सधैँ कटिबद्ध छ । सबै कुरो अर्थ सँग जोडीन्छ , बजेट भर्खर मात्रै पास भएको छ,सबैकुरा अर्थसगं जोडीने भएकाले अब हामी तीब्र गतीमा अगाडी बढ्छौँ । अब योजनाको हकमा ,कार्यन्वयनको हकमा र प्रशासनको हकमा पनि तिब्र गतिमा जान्छौ ।
तपाँइले यो समय छोटो हो भनेर पटक पटक भनिरहनु भएको छ र नागरीकलाई आश्वासत पार्ने प्रयास गरीरहनुभएको छ ,खासमा परिणाम कहिले आउँछ त ?
यो स्वभाबिक हो नेपालमा ६० बर्ष देखी बनिबनाउ सत्ता छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री कार्यलय छ , प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यलयको ठाउमा त्यसको सेवा हेरौ ,६० बर्ष देखी जनताले पाएको सेवा र ४ महिनामा पाउने सेवा केही फरक हुन्छ । यो कुनै बनावटी कुरो नागरिकलाई अश्वत पार्ने कुरो होइन होइन यो यथार्थ कुरो हो । जनतालाई सत्य भन्नु पर्दछ , झुटा कुरा गरेर बिगतमा समस्या पनि भएका छन । मैले अहिले भन्न सक्छु अहिले चम्तकार गर्छु त्यो हुनेवाला छैन। यथार्थमा के हो भने राजनितिक रुपमा चम्तकारको भाषणको कुरा गर्दा जनतालाई ठुलो समस्या हुने गरेको छ ।
तपाइँ मुख्यमन्त्री बन्ने कुरो भए पछी तपाईंले यो अफ्ठारो को आँकलन गर्नु भएको थियो ?
स्वभाबिक रुपमा राजनिती गर्ने ब्यक्तीले सत्ता सन्चालन गर्न जटिल हुन्छ भन्ने कुरो त बुझेर अध्यन गरेकै हुन्छ । त्यो अध्यन नगरेर जाने ब्यक्ती एक छिन त हाइ हाइ होला तर पारीणाम निस्किन सक्दैन । यो प्र्देशमा हामीले राम्रो ब्यस्थापन, राम्रो काम र पारीणमा देखिने कामको लागी मिहेनत गर्नु पर्दछ । पहिलो कुरो त सबै क्षेत्रमा राम्रो सोचको बिकास हुनु पर्दछ । यहाँ रहेको स्रोत साधनलाई परिचालन गरेर जे हामी सँग छ् त्यसको प्रयोग गरेर जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्नु पर्दछ ।
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बिच समन्वय कसरी भइरहेको छ ?
स्थानीय सरकार,प्रदेश सरकार त्यसैगरी केन्द्र सरकारको सविंधानले गरेको कल्पना भनेको हाम्रो देशमा समुन्वयात्मक सहअस्तित्व सहितको सघींयता हो र त्यो भित्र खासगरी स्थानीयतह संघ प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछीको ४ महिनाको अवधीमा स्थानीय तहलाइ काम गर्न सहज होस भनी हामीले केही कानुनहरु बनाएका छौ र केही कानुन हरु अझै छलफलमा छन् ।अब प्रदेशको बजेट पनी आइसकेकोले कर उठाउने,कार्यान्वयनन गर्ने र स्थानीय तहमा भएका काम कार्बाहीको बारेमा सहकार्य गरेर कसरी अगाडी बढ्ने भन्नेमा अब हामी केही विधी बनाउँदै छौँ ।
त्यो त कानुनी कुरा भयो,अहिले चाहिँ समन्वय भइराखेको छ कि छैन?
समुन्वय भइराखेको छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने कुराहरुका बारेमा केही बुझीराखेका छौ र अप्ठ्यारो परेको बेला स्थानीय तहहरुले पनी समुन्वय गरीराखेका छन् । नयाँनयाँ भएर पनी होला काम देखी लिएर छलफल पनी त्यति तिव्र गतिमा त जान सकेको छैन ,त्यसको लागी सविंधानले दिए अनुसार मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा परिषद बनाउने भन्ने छ ,त्यसको वैठक पछी हामी अगाडी बढ्छौँ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिने बजेट कहिले र कसरी बाँडफँड हुन्छ?
प्रदेश सरकारले दिने बजेट हामीले सामान्यकरण अनुदान भनेर अली कम बढी गरेर प्रत्येक स्थानीय तहलाई पनी पठाएका छौँ। दोसो् भनेको सशर्त अनुदान हो त्यो पनी हामीले स्थानीय तहलाइ पठाई सकेका छौँ ।तेस्रो कुरा हामीले विशीष्ट काम गर्ने गाँउपालीका नगरपालीका लाई थप अनुदान दिने भनेर ७५÷७६ को बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ यसका लागी हामी निश्चीत मापदण्ड बनाउँछौँ । यसको उदेश्य भनेको गाउँपालीका र नगरपालीकामा सकरात्मक कामका लागी प्रतिष्पर्धा होस भन्ने हो । हामीले बनाएको मापदण्ड भित्र रहेर काम गर्ने गाउँपालीका र नगरपालीका लाई उत्त रकम प्रदान गर्नेछौँ
बजेट कहिले बाँडफाँड हुन्छ ?
बजेट पास भइसकेको छ,विशीष्ट अनुदानको बजेट मात्रै बाँकी छ केहि दिनमा प्रक्रीया पुरा गरेर त्यो पनी छिट्टै पठाउछौँ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच भुमीका समुनवयमा केहि अनविज्ञता भएको जस्तो देखीन्छ,त्यो अनविज्ञता हटाउन केही प्रहल भएको छ कि छैन?
केहि कुरामा अनविज्ञता हुनु त स्वभावीक नै हो किनकि हामी नयाँ अभ्यासमा छौँ । स्थानीय तहमा काम गर्नको लागी संबिधानले जुन अधिकार दिएको छ त्यसलाइ प्रयोग गर्नको लागी क्षमता अभिवृद्दी गर्नु पनी निकै आवश्यक छ ।अधिकार क्षमता बीच अन्तरविरोध यदि सिर्जना भयो भने त्यसले फेरी नराम्रो प्रभाव पार्छ। यसका लागी आउदो महिना भित्र त्यस्ता खाले कार्यक्रम पनी सञ्चालन गर्दैछौँ ।
प्रदेश सरकारको अहिले को गती ठिकै हो त ?
गतीको कुरोलाई हेर्दाखेरी के देखिन्छ भन्ने बजेट भर्कैर आएको छ ,अर्थले सबैकुरो निर्धारण गर्दछ । अर्थ नै परिचालन गर्न नसक्न्दा गती ठिकै हुने कुरो भएन । यो बिचमा हामीले जनतालाई बुझाउने बुझ्ने कानुन बनाउने कुरा अगाढी बढेको छ । अब बजेट आएको छ अब गतिमा जान्छ । तल काम गर्ने स्थानिय निकाय छनौट हुन्छ ,अनुगमन हुन्छ ,अक्तियारी जान्छ र बिकास निर्माणको कामले गती लिन्छ । बिस्तारै केन्द्रले पनि प्रदेशलाई केही सहज बनाउदै गएको छ । अहिले सम्म हाम्रो मातहत कर्मचारी र कार्यलय आएका थिएनन अब सबै प्रदेशको मातहत आएका छन । कानुन बनाउने कुरोमा हामी गतिमा नै छौं । जनतालाई झुटो कुरा गरेर जाने कुरो हुँदैन । मैले सबै ठाउँमा भन्ने गरेको छु धेरै ठुलो कायपलट र चम्तकार र गर्न नसकुला तर शुरुवात राम्रै गर्छु ।
प्रदेश सातको सरकारले ल्याएको बजेटको आलोचना धेरै भएको हो कि बनाइएको हो ?
आलोचना त सबै बजेटको हुन्छ तर यहाँ अली बढी बनाईयो । हामी सँग भएको स्रोत साधन र पैसा जती छ् त्यो पुग्दैन । अब २५ लाख जनसन्ख्या भएको प्रदेशलाई २३ अर्ब रकम ठुलो होइन । पहिलो अनुभब थियो तल छनौट गर्ने केही बिधी प्रकृया थिएन । २३ अर्ब बाँडदा सबैको अपेक्षा अनुसार पुग्ने कुरा थिएन । आलोचना हुनु अली अली स्वभाबिक थियो । नेपालमा बजेट जुन खर्च नगर्ने परम्परा छ त्यसको अन्त्य गर्छौ ।
अन्त्यमा तपाईं मुख्यमन्त्री सामान्य परिवारबाट हुर्केको मान्छे बन्नु भयो तर तपाईं पनि पटक आलोचित बन्नु भयो ?
त्यस्तो त मलाई लाग्दैन , मेरो ब्यक्तीगत जिबनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । म जे थिए त्य्सतै छु । कामको दृष्टिकोणले मुख्यमन्त्री भएपछी केही परिबर्तन आउनु स्वभाभिक हो । राजनितिक रुपमा ग्रस्त ब्यक्तीहरुले कहिलेकाँही आलोचित बनाउने प्रयास गर्ने गर्दछन तर जनताले बुझेका छन त्य्सले खासै फरक पर्दैन । मेरो लागी कुर्सी ठुलो कुरो होइन जिम्मेवारी ठुलो कुरो हो त्यही जिम्मेवारी बहन गर्दै छु ।